I-OEM & ODM usayizi ogcwele umcamelo ophezulu umatilasi ophezulu kanye nohlu lwamanani entengo entwasahlobo | Rayson
Ukuqondiswa okusha kwesayensi kanye nezobuchwepheshe, iRayson ihlala ihlala igxile ngaphandle futhi inamathela ekukhuleni okuhle ngesisekelo sokwenziwa kobuchwepheshe. Usayizi ogcwele umcamelo ophezulu umatilasi ophezulu kanye ne-box entwasahlobo sithembisa ukuthi sinikeza wonke amakhasimende anemikhiqizo esezingeni eliphakeme kufaka phakathi umcamelo ogcwele umcamelo ophakeme umatilasi ophezulu kanye nentwasahlobo ephelele. Uma ufuna ukwazi imininingwane eminingi, siyakujabulela ukukutshela. Ukuhlolwa kweRayson kuzophathwa kabi. Umkhiqizo uzohlolwa ngokuya ngokuthunga, ukufuya, ukugeza ngokushesha, ukucindezela, namanye ama-WorkManship.